हरेक बिहान यी कार्य गर्नाले जगमगाउने छ तपाईको जीवन « Janaboli
हरेक बिहान यी कार्य गर्नाले जगमगाउने छ तपाईको जीवन
काठमाडौ । वास्तु शास्त्र आफैमा एक विज्ञान पनि हो । हुन त वास्तुको, कुरा गर्दा अहिलेको आधुनिक पुस्ताले यसलाई सिधै अस्वीकार गर्दछन् । आधुनिक पुस्तालाई यो सबै कुरा अन्धविश्वास हो भन्ने सोचाई रहेको छ तर यसभित्र पनि विज्ञान हुन्छ । वास्तु शास्त्रले निर्देशित गर्ने कुरा व्यार्थ हुँदैनन् ।
यद्यपी उक्त निर्देशनको आशय के हो र त्यसको प्रभाव के रहन्छ भन्ने कुरा केलाउन सक्नुपर्छ वा बुझ्न सक्नुपर्छ । हामीमा बिहान उठ्नसाथ पूजापाठ गर्ने चलन छ । तुलसीको मठमा पानी चढाउने । शंख–घण्टी बजाउने । मन्त्रोच्चारण गर्ने । भगवानको नाम जप्ने । यी तमाम कर्मले हाम्रो मनको शुद्धिकरण गर्छ । सकारात्मक भाव पैदा गर्छ । मन शान्त, खुसी र सकारात्मक हुन्छ । यी कर्म गरिरहँदा हामी बिनयी, बिनम्र हुन्छौं । फलतः दिनभर यसको सकारात्मक भाव हामीभित्र रहिरहन्छ ।
वास्तु शास्त्र अनुसार हामीले दिनको सुरुवात नै राम्रो ढंगबाट गर्नुपर्छ, तब मनमा शान्ति छाउँछ । परिवारमा सुख आउँछ । भनिन्छ नि, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । हामीले बिहानीको कर्म जुन ढंगबाट सुरु गर्छौं, त्यही अनुरुप हाम्रो दैनिकी गुज्रन्छ । यसर्थ दिनको सुरुवात सही ढंगबाट गर्नुपर्छ, जसले दिनभरका लागि हामीमा उत्साह, उमंग र उर्जा जागिरहोस् ।भलै यसका लागि स–सना कुराले पनि भूमिका खेल्छ ।
जस्तो बिहान उठ्नसाथ तपाईंले बाथरुम छिर्नुभयो, फ्रेस हुन नपाई ट्यांकीमा पानी सकियो । नतिजा के हुन्छ, तपाईको मुड खराब । यसको राप त्यही क्षण सेलाउदैन, बरु दिनभर नै रहन्छ ।अतः यस्ता संभावित कामबाट बिहानको सुरुवात गर्न ठिक हुँदैन, जसले मुड खराब गराउँछ ।मनमा अशान्ति पैदा हुने, घरमा कलह हुने, साथीभाईसँगको सम्बन्ध खराब हुने कारणमा बिहानीको सुरुवातलाई पनि मानिन्छ ।
वास्तुशास्त्रले भन्छ, पारिवारिक अशान्तिको कारण भनेकै गलत तरीकाले दिनको सुरुवात गर्नु हो ।वास्तु अनुसार दिनको सुरुवात सही ढंगले गर्नर्का लागि बिहान के के गर्नु हुन्छ, के कस्ता काम गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी राख्न जरुरी छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि घरमा सुख समृद्धि कायम राख्न सकिन्छ ।
वास्तु शास्त्रले के भन्छ भने खाना खानुअघि कुनै पनि पशु वा गाउँको नाम लिनु हुँदैन । वस्तुशास्त्रमा यसलाई अशुभ मानिन्छ । त्यसो भए वास्तु अनुसार विहान उठ्ने वित्तिकै के गर्ने ?
आमा, बुबाको खुट्टा ढोग्ने
मातापिता भनेको जगतजननी हुन् । जगतजननी भएकै कारण उनीहरुमा दिव्य शक्ति हुन्छ । र, उक्त दिव्य शक्ति मातापिताद्धारा नै प्राप्त गर्न सकिने हुदाँ त्यसलाई हासिल गर्न पनि मातापिताको खुट्टा ढोग्नु पर्छ । त्यसबाहेक, मातापिता प्रति सम्मान प्रकट गर्न तथा मातापिताबाट आर्शीवाद प्राप्त गर्न पनि वास्तुशास्त्रका आधारमा विहान उठेर सबैभन्दा पहिले माता पिताको खुट्टा ढोग्नसपर्छ । त्यस्तै, आफ्नो हस्तरेखा हेरेर भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ । यसले घरमा सकारात्मक माहोल पैदा गर्नुका साथै व्यक्तिमा आत्मविश्वास जगाउँछ ।
घर बाहिर रंगोली बनाउने
संभव भएसम्म बिहान सबेरै घरको आगँनमा रंगोली बनाउनाले घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्छ ।
घरमा तुलसीको बिरुवा रोप्नु धार्मिक दृटिकोणले मात्र नभएर आध्यात्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत फलदायक मानिन्छ । यसले बाताबरणको प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । ज्ञान, विवेक, सुख, सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यमा राम्रो गर्छ । भनिन्छ, जुन घरमा तुलसीको वास हुन्छ, उक्त घर सुखी हुनुका साथै स्वस्थ रहन्छ ।त्यसैले पनि विहान उठ्ने वित्तिकै तुलसीलाई जल चढाउनु पर्छ । यसले घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुनुका साथै स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ ।
विहानको समयमा नुहाएर तामाको लोटामा जल भरेर त्यसमा तुलसीको पत्ता राख्नु पर्छ । अब यसलाई घरको मुख्य ढोका र प्रत्येक कोठामा छर्किनु पर्छ । यसो गर्नाले घरको नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने गर्दछ । घरको नकारात्मक शक्ती बाहिर जान्छ ।
घरमा विहान सबेरै उठेर घरको चारैतिर बिषेश गरी मुल ढोकामा दियो बाल्नाले सकारात्मक उर्जाको पवेश हुन्छ । साथै, घरमा आर्थिक शंकट पनि कहिलै हुदैन । घरकी महिलाले एक लोटो पानी घरको मुख्य द्धारमा राखेको खण्डमा घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ ।
एजेन्सी । हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य
तपाईले यस्ता ३३ सपना देख्नुभयो भने ग्यारेण्टी भन्न सकिन्छ कि खराब समयका यी ६ संकेत दिएको छ !
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास नगर्ने सायदै कमै छन् । किनकी ज्यातिष विज्ञानमा हाम्रो जीवन अडेको
यी ३ राशिका युवतीले जो कोही पुरुषलाई भुतुकै बनाउँछन्
एजेन्सी । सुन्दरता व्यक्तिको धन हो । सुन्दर जे सुकै देखे पनि खुशी रहने मानव
काठमाडौ । सुख, खुशी र सम्वृद्धि कसको अपेक्षा हुँदैन र । मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यान्त यही